प्रचण्डले नदिएको भए ओली प्रम बन्ने नै थिएनन्। पुर्वसचिव भिम उपाध्याय - ढोरपाटन पोष्ट
प्रचण्डले नदिएको भए ओली प्रम बन्ने नै थिएनन्। पुर्वसचिव भिम उपाध्याय
२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार १७:४१
नेपाल सरकारका पुर्वसचिव भिम उपाध्याय लेख्नु हुन्छ, पुर्वएमाले र पुर्वमाओबादी एकिकरण गरेको ओलीलाई माओबादीले सर्वश्व चढाउन थियो र? आधा आधा अवधि आलोपालो प्रम बनेर सरकार चलाउने नीतिका आधारमा यी दुई दल एकिकरण भएको थियो। यो सबै ओलीका लागि एकछत्र प्रम बन्ने दाउ मात्र थियो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
संविधानले २ वर्षसम्म प्रमउपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भएकोले सरकार स्थीर जस्तो देखिएको थियो। सर्पको खुट्टा सर्पले देखि सकेका थिए। प्रचण्डले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर ओलीलाई प्रम बनाएका हुन्। प्रचण्डले नदिएको भए ओली प्रम बन्ने नै थिएनन्।
प्रम बनिसकेपछि गणतन्त्र र संघीयताका प्रणेता प्रचण्ड संघीयता एवं गणतन्त्र बिरोधी नेता ओलीको निवास बालुवाटार दिनदिनै तारन्तार बारम्बार धाउने गर्नु नै महानिर्लज्ज काम थियो। ओली भने दिनदिनै विद्याको निवास धाई रहदै गरे।
प्रचण्डको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउने तर संघटक दलका प्रमूख नेतालाई नै बेवास्ता गर्नुको परिणाम अहिले एमाले ध्वस्त हुन पुगेको छ। भष्मासूरको हविगत हुदैछ। अब कि ओली ध्वस्त कि नेकपा ध्वस्त, अरू कुनै विकल्प छैन। सरकार जो सुकैको नेतृत्वमा जस्को बनोस्।
मैले ओलीको चालढाल सुरूको १ वर्षसम्म देखेपछि लगातार निरन्तर सचेत गराईरहेको थिएँ। मैले मत दिएर विजेता भएका दलको सरकार सही बाटोमा हिडेको छैन, दोश्रो मातृका कोईराला जन्मदै छ, दोश्रो चाउचेस्कू हुन बेर लाउदैन भन्दै आएको थिएँ।
यो अवस्थाका मूख्य दोषी ओली, प्रचण्ड र बामदेव हुन् हुने छन् भन्दै आएको थिएँ।मति भ्रष्टहरूले बुद्धिमानको कुरा कहिल्यै सुनेको ईतिहास विश्वमा कतै छैन। जे हुनु छ भएको छ, कौवालाई बेल पाकेको छ। नो चिन्ता, नो फिक्री। बिहे नगरिदिने बाउको बाख्राको घोर भत्काईदिएको छ।
दुनियामा कर्मको फल सबैले भोग्छन्, यो नियम अकाट्य छ। मान्छे नमर्लान तर ठूलो दुर्घटना र गंभीर घाईते भईसकेको छ, र जीवनपर्यन्त अपाँङ जीवन बॉच्न अभिशप्त भएका छन्। जैसा करनी वैसा भरनी!
समढे पाल्ने रहर गरेर मात्र हुदैन, तियसलाई तहलाउने नार्ने क्षमता र। ल्याकत पनि राख्नुपर्छ। छाडा सॉढेले दुनियाको बाली सोत्तर पारिदिन्छ।सॉढेलाई मज्जाले डाम्न पनि नसक्ने साढेँले मास्यो भनेर रोईलो नमात्र गर्ने नेता हुदैनन्, ती बढीमा अभिनेता हुन्छन्। अभिनेतालाई नेता ठान्ने मूर्ख हामी कोही बन्नु हुदैन।
बिकट गाउँ सल्यानमा बल्यो केन्द्रिय विद्युत : विपन्न घरधुरीलाई निशुल्क मीटर वितरण ।
बरेङ गाँउपालिकामा ३९ औं मगर स्थापना दिवस मनाइयो
संसदमा हिन्दी बाेल्न पाईदैन : डा.राजेश झा
पार्टी ह्वीप वा पार्टी लाइनको उल्लंघन
के यो देशमा साँच्चै न्याय मरिसकेको हो? : वर्षा सिवाकोटी